Anwar Jamili - Equal Access International
Agaasimaha Dalka, Afghanistan
Anwar Jamili wuxuu leeyahay in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo hoggaamineed isgaarsiin, wacyigelin ah iyo barnaamijyo ku lug leh bulshada oo ay ku jiraan raadiyaha, TV-ga iyo masraxa bulshada. Wuxuu leeyahay khibrad ballaaran xagga qorista, qaabeynta iyo soo saarista barnaamijyada warbaahinta.
Anwar Jamili waa Agaasimaha Wadanka Afghanistan ee EAI oo hogaaminaya barnaamijyo hal abuur leh dhamaan 34-da Gobol ee Afghanistan mudo kabadan 13 sano. Anwar wuxuu siiyaa hogaamin istiraatiiji ah iyo kormeer wuxuuna wakiil ka yahay EAI Afghanistan deeq bixiyaasha, la-hawlgalayaasha, iyo bulshada deegaanka. Wuxuu khibrad dheer u leeyahay qorista, qaabeynta iyo soo saarista barnaamijyada warbaahinta.
Jamili waxay siisaa shaqaale farsamo yaqaan khibrad leh shaqaalaha barnaamijka iyada oo loo marayo qorsheynta istiraatiijiyadeed ee wax soo saarka. Wuxuu maareynayaa shaqaalaha Afgaanistaan ​​wuxuuna kormeeraa habsami u socodka wax soo saarka dhammaan waxyaabaha ku saabsan howlaha barnaamijka maxalliga ah. Anwar wuxuu leeyahay aqoon maxalli ah oo muhiim ah xagga waxbarashada, khilaafaadka, iyo xirfadaha gaarka ah ee uu la shaqeynayo hoggaamiyeyaasha diinta iyo dowladda Afgaanistaan.
Jamili markay ka qalin jabisay Kuliyada Caafimaadka Shaekh Zayed, Jamili waxay ka shaqeysay doorar kala duwan sida khabiir warbaahin ah, oo ay kujiraan maamule sare oo barnaamij, maareeye soo saare, soo saare iyo tabobar mashaariic kaladuwan oo diirada lagu saaray xuquuqda haweenka, dimuqraadiyada, beeraha, caafimaadka, iyo dhalinyarada. barnaamijyada awoodsiinta. EAI ka hor, Anwar wuxuu la shaqeeyay Chemonics - Barnaamijka Dib-u-dhiska Suuqyada Beeraha isagoo ah Maareeyaha Isgaarsiinta. Jamili sidoo kale waa fanaan sare oo riwaayad riwaayad ah isla markaana jilaa ka ah riwaayadda raadiyaha ugu dheer ee Afgaanistaan ​​ee ay soo saarto BBC / AEP New Life New Life. Si aad ulaxariirto Anwar Jamili fadlan emayl ugu dir info@equalaccess.org.